6 Mienzaniso Yemabhizimusi Akakwanisa Sei Kukura Panguva Yekutapukira | Martech Zone
Pakutanga kwedenda, makambani mazhinji anotema mabhajeti avo ekushambadzira uye ekutengesa nekuda kwekuderera kwemari. Mamwe mabhizinesi akafunga kuti nekuda kwekuwandisa kwevanhu mabasa, vatengi vaizorega kushandisa mari kushambadza uye kushambadzira bhajeti yakadzikiswa. Aya makambani anovhima pasi mukupindura kuoma kwehupfumi.
Pamusoro pemakambani ari kuzeza kuenderera kana kutanga mishandirapamwe yekushambadzira, nhepfenyuro neredhiyo zvaive zvichinetseka kuunza nekuchengetedza vatengi. MaAgency uye mafemu ekushambadzira anogona kushandisa mukana uno kubatsira mativi ese kukunda dambudziko rakakonzerwa nedenda. Sekuona kweSilver Frog Kushambadzira, izvi zvinogona kukonzeresa kushambadzira uye kushambadzira mishandirapamwe iyo yakabatsira kuwedzera mabhizinesi panguva yedenda. Heano maitiro emabhizimusi akakwanisa kukura munguva yedenda, uye maitiro ekuramba uchifunga mundangariro apo vachivaka post-denda kushambadzira mishandirapamwe.
Sezvo mabhizimusi akatarisa mapaipi avo achigwamba apo denda rakarova, vatungamiriri vakashanda kuchengetedza nekukura hukama pane kuvimba netarisiro. Makambani mazhinji akaita danho rekudyara mukushandurwa kwedhijitari sezvo vashandi vavo vaisashanda zvakanyanya sezvo zvakadzora kukanganisa kwese kuita. Nekutama uye kugadzirisa mashandiro emukati, makambani akakwanisa kutyaira kugona.
Kunze kwekunze, kutamira kune mamwe mapuratifomu akasimba kwakazarura mikana yekupa ruzivo rwevatengi rwepamusoro zvakare. Kuteedzerwa kwenzendo dzevatengi, semuenzaniso, kutyaira kubatanidzwa, kukosha, uye kusimudzira mikana nevatengi varipo. Zvese zvemukati nekunze kukanganisa kwakadzvinyirira madhora mazhinji uye kunopa hwaro hwekutengesa kwekutanga sezvo hupfumi hwadzoka.
Kutaurirana Pamberi Pekupedzisira
Kune zviteshi zveterevhizheni neredhiyo, denda rakakonzera kusava nechokwadi nekuda kwekuchinja mabhajeti ekushambadzira nemakambani anodhonza mishandirapamwe ekushambadzira. Zvakave pachena kuti vamiririri nezviteshi zvinofanirwa kushanda pamwechete kuitira kubatsira kuzadzisa zvido zvavo. Kushanda pamwe chete nechiteshi kuti mutaurirane mareti kumberi kwekupedzisira hakugone chete kubatsira chiteshi, asiwo kubatsira mutengi wako.
Kutsvaga zvinhu zvakaita sehukuru hwevateereri uye mamwe maparamende ekutenga kumisangano yekutaurirana kuti uwane mitengo yakaderera kune vese vatengi chinhu chinogona kuve chakakosha kumisangano iyi. Ukangodzikisa yako rate, yako mutengo pamhinduro inoderera uye ipapo yako ROI uye purofiti inozokwira kumusoro.
Christina Ross, co-muvambi weSilver Frog Kushambadzira
Nekutaurirana aya madhiri usati watombotaura nemutengi, iwe unovhara mumakambani mareti ayo anogona kuomera vakwikwidzi kurova. Panzvimbo pekutaurirana zvichibva nekambani yakatarwa, kutaurirana kumberi kwekupedzisira kunogona kupa zvirinani kusasarura mitengo kune chiteshi uye mutengi.
Remekedza Uye Seta Chaicho Mabhajeti
Munguva yedenda, makambani aizeza kuisa parutivi mabhajeti akakura nekuda kwekusaziva uye kusahadzika kuti vatengi vanenge vachishandisa mari. Ndosaka zvichinetsa kuti makambani arambe achiisa mabhajeti avakagadzikana nawo uye achivaremekedza apo mushandirapamwe uchatangwa
Nguva dzose tanga nebhajeti iwe yaunofara nayo. Iwe unogona kuita izvi nekuongorora zvakapfuura mitengo, zviitiko, uye chii chakashanda iwe nekambani yako. Nekuisa izvi mabhenji, iwe unogona kuve nekunzwisisa kwakajeka kweizvo iwe zvaunoda kushandisa kuti utore mune yakatarwa mari.
Uku kunzwisisa uye kubata nhaurwa dzakatendeseka nevatengi panguva yedenda kunotungamira mukubudirira kukuru. Kubudikidza nekutsvaga data remusika, kugara pamusoro pemitero uye kubata zviteshi kuzvidavirira kwenguva yavo yekumhanyisa kuwana makiredhi, makambani anogona kumisikidza mibairo mikuru kune vatengi vavo.
Iva Nechirongwa Chinochinja
Iyo denda rave rakaomarara zvakanyanya kufamba nekuti chinhu chisingafungidzirwe. Hatina nzwisiso pamusoro pekukanganisa kwakanyanya kana trajectory yedenda nekuda kwekuti hatina kumbobvira tafamba izvi zvisati zvaitika. Munguva ino, zvakakosha kuti mishambadziro yekushambadzira igare yakachinjika.
Chete kubhuka vatengi kunze kwevhiki mbiri, kana mwedzi, panguva inobvumidza kugona kwakaringana. Izvi zvinobvumidza vamiriri kuti vaongorore manhamba uye voona kuti ndezvipi misika, zviteshi, uye masikati zvinonyanya kunaka uye pane mishandirapamwe iri kurova kuitira kuti ugone kutarisa kune vanoita zvakanaka pane kutambisa mari yemutengi wako.
Uku kuchinjika kunotendera kuti makambani nemasangano vagare vachikwiridzira mishandirapamwe yavo yekuwana yakakwira ROI. Sezvo nzvimbo dzakanyanya kurohwa dzichiri kuramba dzichichinja uye mamiriro ehurumende akasununguka nezve kuvhurwa, zvichibvumira mushandirapamwe wako kugara uchichinjika zvinoita kuti kushambadza kwako dhora kutenderera nezvibhakera zvisingafungidzike zvatakatarisana nazvo izvozvi. Mimwe mira mirefu uye yakareba ichaparadza kushambadzira madhora uye inoguma nemhinduro yakaderera nemutengo wakakwira parunhare.
Target Masikati Masikati
Munguva yedenda, vamwe vatengi vaiiswa mabasa vamwe vachishanda kudzimba.
Dzimwe nguva isu tine vatengi vanotaura kushushikana kudiki pamusoro pekuburitsa masikati mukati mekufunga kwakashata kwekuti vanhu vese vanoona TV masikati havana basa. "Icho chaive chisiri chokwadi, kunyangwe denda risati rasvika, asi ikozvino zvakatonyanya kudaro nevanhu vazhinji vari kushanda pamba."
Steve Ross, co-muvambi weSilver Frog Kushambadzira
Nevanhu vazhinji vanoona terevhizheni uye vachiteerera redhiyo, mutengo pamitengo yekufona wakadzikira. Vanhu vazhinji vaive pamba zvichireva kuti vanhu vazhinji vaiona kushambadzira kwechigadzirwa uye kudana mukati.
Izvo zvakakosha kuti utore mukana weiyi slots sezvo vateereri vari kuramba vachichinja. Nekurovera mukati mevateereri vatsva, chigadzirwa chako chichaiswa pamberi pevanhu vazhinji vanokwanisa kuisa mari. Izvo zvakare zviri kubvumidza kupinda kune avo vaungave usingakwanise kusvika pamberi pehosha nekuda kwemabatiro ebasa emabasa uye kuona kwakaderera kubva kune vamwe vanhu.
Gadzira Yakasarudzika Kuyera Matekiniki
Vatengi pavanopindura kumisangano yekushambadzira, kungobvunza kwavakaona kushambadza kungave kufamba kune njodzi. Izvi imhaka yekuti kazhinji yenguva, mutengi anotarisa zvakanyanya pachigadzirwa zvekuti havacharangarira kwavakachiwona. Izvi zvinogona kutungamira mukutsausa kuzivisa pasina mhosva yemutengi.
Kubatsira kuyera kushambadza, zvakanakisa kushandisa chaiyo 800 nhamba kune yega yekutengesa. Iwe unogona kuzvibatanidza uye uine idzi nhamba dzichinongedzera munzvimbo imwechete yekufona kuitira nyore mutengi wako. Nekupa iyo chaiyo nhamba kune yega yega kushambadzira, iwe unogona kuteedzera kunobva nhare uye nekuburitsa yakajeka mitsara. Nenzira iyi, iwe unonyatso ziva izvo zviteshi zviri kubatsira mutengi wako zvakanyanya kuti iwe ugone kuenderera nekudzikisira akabudirira masosi emari uye kuvaka ROI.
Idzi nhamba dzinogona kubatsira kana uchinzwisisa izvo zviteshi uye misika mushandirapamwe wako unofanirwa kuramba uchinangisa. Nekusina zviyero chaizvo zvekupindura, hazvingogone kukuvadza mushandirapamwe wako, asiwo zvinokuvadza yako bhajeti rekushambadzira
Sezvo Sirivheri Frog Kushambadzira yakatarisana nemabhizimusi mazhinji aisaziva kana vachizopona nedenda, vakaenderera mberi nekuedza kubereka kubudirira kwavo kwekare. Kubva mukukura kwemabhajeti evatengi 500%, kudzikira kwemutengo wevatengi pamhinduro ne66%, vakagonesa mabhizinesi kuwedzera mari uye kudzoka mukudyara panguva yekukwirira kwedenda; zvese vachishandisa mari shoma pane yavaive vajaira.
Parizvino, zvakakosha kuti makambani arambe achishambadza kuti awedzere kubva kune chero kurasikirwa uye arambe achikura.
Kana iwe kana kambani yako uchida kudzidza zvakawanda nezve matipi uye manomano ekuvandudza kushambadzira mishandirapamwe panguva yedenda, shanyira iyo Sirivha Frog Kushambadzira Website.
Tags: shambadzabudgetsbhizinesi kukuracoronavirusshanduko yedhijitariupfumipurogiramu inoshandukapandemicbhajeti rekutengesakutengesa kuyerwakutaurirana kwekutengesapurogiramu yekutengesatarisa masikati masikati
Denda rakarova bhizinesi zvakanyanya zvakaoma. Asi avo vakakwanisa kujairana nemamiriro matsva aya vakaramba. Inonakidza uye inodzidzisa. Ndatenda!